.ဂေါကျရောဂါ၊ အကြိတျ၊အစာအိမျအနာ၊နှလုံးတို့ ကို ကောငျးမှနျစသေညျဆိုသော … သကွားသီးပငျ. – Askstyle
.ဂေါကျရောဂါ၊ အကြိတျ၊အစာအိမျအနာ၊နှလုံးတို့ ကို ကောငျးမှနျစသေညျဆိုသော … သကွားသီးပငျ.
ဒီသကြားသီးဆိုတာက ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ သကြားသီးမဟုတ်ပါဘူး။ အလေ့ကျပေါက်ပင်လိုမျိုးတွေ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ အသီးနီနီလေးတွေသီးတဲ့ သကြားပင်ရဲ့ အသီးနီနီလေးတွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အသီးလေးတွေက သီးစမှာ အစိမ်းရောင်ဆိုပေမယ့် မှည့်လာတဲ့အခါ အနီရောင် လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အခွံကခပ်ပျော့ပျော့ရှိပြီး တစ်လုံးလုံးကို စားလို့ရပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် ဒီအသီးလေးတွေက ဘယ်လိုဆေးဖက်ဝင်လဲ ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါရစေ။ ဒီအပင်က ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မက္ကဆီကို မျိုးရင်းပင်တွေပါ။
သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပြင်ပကဘက်တီးရီးယားတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင် တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သကြားသီးမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ် တဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအရောင်ကျဆေးတစ်မျိုးလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ သကြားသီးက အရောင်ကျဆေးတွေနီးပါး ထိရောက်မှုရှိ ပါတယ်။ အဖျားကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါဆိုတာက အဆစ်တွေရောင်ရမ်းပြီး နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆစ်ထဲကနေ တဆစ်ဆစ်နာပြီး နီရဲရောင်ရမ်းနေတတ်ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါက အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များပြီး အဆစ်တွေ၊အရွတ်တွေနဲ့ အခြားတစ်ရှုးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါ တယ်။ သကြားသီးကို ဂေါက်ရောဂါသက်သာစေဖို့အတွက် စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်နေ့ကို သကြားသီး ၉ လုံးကနေ ၁၂ လုံးအထိစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အရိုးအဆစ်တွေထိခိုက်နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ဖလေဗာနွိုက်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကောင်းမွန်အောင် အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ သကြားသီးမှာ ဖလေဗာနွိုက်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး လူကြီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အသက်အရွယ်ရလာလို့မေ့တတ်တာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးမှာပါတဲ့ Cytoxic Flavnoids က ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ တော်တေ်ာလေးအသုံးဝင်ပါ တယ်။ အသီးတင်မကဘဲ သကြာသီးပင်ရဲ့ အရွက်ကပါ ကင်ဆာကိုတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိ်နေတာပါ။ ရင်သားကင်ဆာကလွဲလို့ အခြားကင်ဆာတွေကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာ သကြားသီးက အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
သကြားသီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ယူရစ်အက်ဆစ်တွေပိုလျှံနေတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ Anthrosyanin လို့သိကြတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပါဝင်နေပါတယ်။ သကြားသီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်တွေက ကိုယ်တွင်း ယူရစ်အက်ဆစ်ပမာဏကိုကျဆင်းစေနိုင် ပါတယ်။
သကြားသီးမှာပါတဲ့ ဖလေဗာနွိုက်က ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကင်ဆာကျိတ်တွေဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။ သကြားသီးရဲ့ အရွက်နဲ့ပင်စည်တွေမှာပါ ကင်ဆာကျိတ်ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိ်တာပါ။
သကြားသီးမှာပါတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းက အစာအိမ်ထဲမှာ လေထတာကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သကြားသီးက လေသက်စေနိုင်သလို၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်လည်းရှိပြီး ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်း လျော့ပါးသက်သာစေ နိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးက ချိုတယ်ဆိုပေမယ့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတွေအနေ နဲ့ သကြားသီးကိုစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သကြားသီးရော သကြားသီးပင်ရဲ့ အပွင့်ကပါ ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ သကြားသီးက သွေးတွင်းအဆီနဲ့ကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေနိုင်ပြီး ဝမ်းလည်းမှန်စေပါတယ်။
အစာအိမ်အနာရှိသူတွေအနေနဲ့ သကြားသီးစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ သကြားသီးက အစာအိမ်အနာကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးတစ်ခုပါ။ သကြားသီးပင်က ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေနိုင် တာကြောင့် အစာအိမ်ထဲက အနာတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးမှာ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းသူတွေလည်းစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
သကြားသီးမှာ ဗီတာမင် C ပါဝင်တာကြောင့် အအေးမိ၊ချောင်းဆိုး၊ တုပ်ကွေးရောဂါတွေလိုမျိုး ကိုယ်ခံအားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးပင်အရွက်မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ နှလုံး ရောဂါတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သကြားသီးက
သကြားသီးပင်အရွက်မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ နှလုံး ရောဂါတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သကြားသီးက နှလုံးဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေဖြစ်မလာအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သကြားသီးရောအရွက်ကပါ အအေးမိတုပ်ကွေးဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင် ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ သကြားသီးကိုစားပေးတာဖြစ်ဖြစ် အရွက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေနွေးထဲ ခတ်သောက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
သူများရေးထားတာcopy ယူထားတာပါ လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့်
ဒီသကွားသီးဆိုတာက ဈေးကှကျထဲမှာရောငျးခနြတေဲ့ သကွားသီးမဟုတျပါဘူး။ အလကေ့ပြေါကျပငျလိုမြိုးတှေ မိမိပတျဝနျးကငျြမှာမွငျတှနေ့ရေတဲ့ အသီးနီနီလေးတှသေီးတဲ့ သကွားပငျရဲ့ အသီးနီနီလေးတှကေို ဆိုလိုခငျြတာပါ။ အသီးလေးတှကေ သီးစမှာ အစိမျးရောငျဆိုပမေယျ့ မှညျ့လာတဲ့အခါ အနီရောငျ လေးတှဖွေဈလာပါတယျ။ အခှံကခပျပြော့ပြော့ရှိပွီး တဈလုံးလုံးကို စားလို့ရပါတယျ။ အခုတဈခေါကျ ဒီအသီးလေးတှကေ ဘယျလိုဆေးဖကျဝငျလဲ ဆိုတာကိုပွောပွပေးပါရစေ။ ဒီအပငျက ဖိလဈပိုငျနဲ့မက်ကဆီကို မြိုးရငျးပငျတှပေါ။
သကွားသီးက ခန်ဓာကိုယျထဲကို ပွငျပကဘကျတီးရီးယားတှမေဝငျရောကျနိုငျအောငျ တိုကျထုတျပေးပါတယျ။ သကွားသီးမှာ ဘကျတီးရီးယားတှကေို တိုကျဖကျြနိုငျတဲ့ အာနိသငျရှိနတောကွောငျ့ ဘကျတီးရီးယားတှကွေောငျ့ဖွဈ တဲ့ကူးစကျရောဂါတှကေို တိုကျဖကျြပေးနိုငျပါတယျ။
သကွားသီးက ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ ရောငျရမျးမှုကိုလြော့ပါးသကျသာစနေိုငျပါတယျ။ သဘာဝအရောငျကဆြေးတဈမြိုးလို့လညျးဆိုလို့ရပါတယျ။ သကွားသီးက အရောငျကဆြေးတှနေီးပါး ထိရောကျမှုရှိ ပါတယျ။ အဖြားကိုလညျး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
ဂေါကျရောဂါဆိုတာက အဆဈတှရေောငျရမျးပွီး နာကငျြမှုကိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အဆဈထဲကနေ တဆဈဆဈနာပွီး နီရဲရောငျရမျးနတေတျပါတယျ။
ဂေါကျရောဂါက အမြိုးသားတှမှော အဖွဈမြားပွီး အဆဈတှေ၊အရှတျတှနေဲ့ အခွားတဈရှုးတှကေို ထိခိုကျစနေိုငျပါ တယျ။ သကွားသီးကို ဂေါကျရောဂါသကျသာစဖေို့အတှကျ စားသုံးပေးလို့ရပါတယျ။ တဈနကေို့ သကွားသီး ၉ လုံးကနေ ၁၂ လုံးအထိစားသုံးပေးမယျဆိုရငျ အရိုးအဆဈတှထေိခိုကျနာကငျြတာကို သကျသာစနေိုငျမှာပါ။
ဖလဗောနှိုကျကွှယျဝတဲ့အစားအစာတှကေ ဦးနှောကျရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုနဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေောငျးမှနျအောငျ အထောကျအကူပွုပေးပါတယျ။ သကွားသီးမှာ ဖလဗောနှိုကျကွှယျဝစှာပါဝငျနတောကွောငျ့ သိမွငျမှုစှမျးရညျကို ကောငျးမှနျစပွေီး လူကွီးတှမှောဖွဈတတျတဲ့ အသကျအရှယျရလာလို့မတေ့တျတာကိုလညျး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
သကွားသီးမှာပါတဲ့ Cytoxic Flavnoids က ကငျဆာဆဲလျတှကေို တိုကျဖကျြရာမှာ တျောတျောလေးအသုံးဝငျပါ တယျ။ အသီးတငျမကဘဲ သကွာသီးပငျရဲ့ အရှကျကပါ ကငျဆာကိုတိုကျဖကျြနိုငျတဲ့ အာနိသငျရျှိနတောပါ။ ရငျသားကငျဆာကလှဲလို့ အခွားကငျဆာတှကေိုတိုကျဖကျြရာမှာ သကွားသီးက အထောကျအကူပွုပေးပါတယျ။
သကွားသီးမှာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာ ယူရဈအကျဆဈတှပေိုလြှံနတောမြိုးမဖွဈအောငျ ကာကှယျရာမှာ အထောကျအကူပွုပေးတဲ့ Anthrosyanin လို့သိကွတဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးပါဝငျနပေါတယျ။ သကွားသီးမှာပါတဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြအာနိသငျတှကေ ကိုယျတှငျး ယူရဈအကျဆဈပမာဏကိုကဆြငျးစနေိုငျ ပါတယျ။
သကွားသီးမှာပါတဲ့ ဖလဗောနှိုကျက ခန်ဓာကိုယျမှာ ကငျဆာကြိတျတှဖွေဈပျေါမှုကို တားဆီးပေးပါတယျ။ သကွားသီးရဲ့ အရှကျနဲ့ပငျစညျတှမှောပါ ကငျဆာကြိတျကို တားဆီးနိုငျတဲ့ အာနိသငျရျှိတာပါ။
သကွားသီးမှာပါတဲ့ ဒွပျပေါငျးက အစာအိမျထဲမှာ လထေတာကိုသကျသာစနေိုငျပါတယျ။ သကွားသီးက လသေကျစနေိုငျသလို၊ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြအာနိသငျလညျးရှိပွီး ရောငျရမျးမှုကိုလညျး လြော့ပါးသကျသာစေ နိုငျပါတယျ။
သကွားသီးက ခြိုတယျဆိုပမေယျ့ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကိုထိနျးညှိပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ ဆီးခြိုသမားတှအေနေ နဲ့ သကွားသီးကိုစားသုံးပေးမယျဆိုရငျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကိုထိနျးညှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သကွားသီးရော သကွားသီးပငျရဲ့ အပှငျ့ကပါ ရာသီလာစဉျ နာကငျြကိုကျခဲမှုဝဒေနာကို လြော့ပါးသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
သကွားသီးမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့ ပြျောဝငျလှယျတဲ့အမြှငျဓာတျတှပေါဝငျနပေါတယျ။ သကွားသီးက သှေးတှငျးအဆီနဲ့ကိုလကျစထရောကိုကဆြငျးစနေိုငျပွီး ဝမျးလညျးမှနျစပေါတယျ။
အစာအိမျအနာရှိသူတှအေနနေဲ့ သကွားသီးစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ သကွားသီးက အစာအိမျအနာကို သကျသာစနေိုငျတဲ့ သဘာဝဆေးတဈခုပါ။ သကွားသီးပငျက ရောငျရမျးနာကငျြမှုကိုလြော့ပါးသကျသာစနေိုငျ တာကွောငျ့ အစာအိမျထဲက အနာတှကေိုလညျး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
သကွားသီးမှာ ဗီတာမငျ နဲ့ သတ်တုဓာတျတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျခံအားကိုကောငျးမှနျစနေိုငျပါတယျ။ ကိုယျခံအားနညျးသူတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောပါတယျ။ သှေးအားနညျးသူတှလေညျးစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
သကွားသီးမှာ ဗီတာမငျ C ပါဝငျတာကွောငျ့ အအေးမိ၊ခြောငျးဆိုး၊ တုပျကှေးရောဂါတှလေိုမြိုး ကိုယျခံအားနညျးတာကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ဝဒေနာတှကေို လြော့ပါးသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
သကွားသီးပငျအရှကျမှာ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတာ၊ နှလုံး ရောဂါတှကေို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ သကွားသီးက
သကွားသီးပငျအရှကျမှာ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတာ၊ နှလုံး ရောဂါတှကေို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ သကွားသီးက နှလုံးဆိုငျရာ ဝဒေနာတှဖွေဈမလာအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
သကွားသီးရောအရှကျကပါ အအေးမိတုပျကှေးဝဒေနာကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကို သကျသာစနေိုငျ ပါတယျ။ ခေါငျးကိုကျတဲ့အခါ သကွားသီးကိုစားပေးတာဖွဈဖွဈ အရှကျကို ရစေငျအောငျဆေးပွီး ရနှေေးထဲ ခတျသောကျတာမြိုးဖွဈဖွဈလုပျလို့ရပါတယျ။
သူမြားရေးထားတာcopy ယူထားတာပါ လိုအပျတဲ့သူတှအေတှကျရညျရှယျပါတယျရှငျ့